| ५:०६:४४ मा प्रकाशित
वि.सं. २०७७ साल फाल्गुन ०१ गते । शनिबार इ.स.२०२१ फेब्रुवरी १३ तारिक । शकसंवत् १९४२ । प्रमादी संवत्सर । उत्तरायण । शिशिर ऋतु । नेपाल संवत् ११४१ । माघ शुक्लपक्ष । तिथी– द्वितीया,२४ बजेर ४२ मिनेट उप्रान्त तृतीया । नक्षत्र–शतभिषा,१५ बजेर १४ मिनेट उप्रान्त पूर्वाभाद्रपदा । योग– शिब,२५ बजेर ४१ मिनेट उप्रान्त सिद्ध । करण–बालव,१२ बजेर २३ मिनेट उप्रान्त कौलव,२४ बजेर ४२ मिनेट उप्रान्त तैतिल । आनन्दादिमा–आनन्द योग । चन्द्रराशि–कुम्भ । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ०६ बजेर ४४ मिनेटमा,सूर्यास्त १७ बजेर ५२ मिनेटमा । दिनमान २७ घडी ४८ पला । फाल्गुन संक्रान्ति ।
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ):- कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा लगानी गरी मनग्गे आम्दानी गर्न सकिने छ । खनिज पदार्थ तथा पानीसँग सम्बन्धित कामबाट भनेजस्तो आम्दानी हुनेछ । शिक्षा तथा बैंकसँग सम्बन्धित कामबाट भनेजस्तो आम्दानी हुनेछ । प्रणय सम्बन्धमा नजिक हुने समय रहेको छ भने जीवनसाथीको सहयोगले राम्रा काम गर्न सकिनेछ । ईच्छा, आकांक्षा तथा मनोकामना पुरा हुनेछन् । सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिको प्रयोगमार्फत आफ्ना विचारहरु जनमानसमा लैजान सकिनेछ ।
बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो):- आफन्त तथा परिवारका साथ उपलब्धिमुलक रमाइलो यात्राको सम्भावना देखिन्छ । काम गर्ने जोश, जाँगर र आत्मबल बढ्ने छ । न्यायिक काममा भएको उल्झन बिस्तारै हराउँदै जाने छ । साथीभाई तथा ईष्टमित्रको सहयोग मिल्नेछ ।मान्यजनको सहयोगमा गरेको काममा सफलता मिल्ने छ । नयाँ काम गरी मनग्गे लाभ लिन सकिनेछ भने रोजगारीको खोजीमा हुनेहरुले काम पाउने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । काम गर्ने ठाउँमा तपाईको कामको प्रशंसा हुने छ ।
मिथुन ( का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) :- सानो प्रयत्नले हुने काम पनि दिनभर लगाएर गर्नुपर्दा समय त्यतिकै व्यतित हुनेछ । बन्द व्यापारमा मन्दी आउनेछ । स्वास्थ्यमा समस्या आउने योग रहेको छ । पढाईमा समय दिन नसक्दा अरुभन्दा पछि परिने छ । साथीभाई तथा छिमेकमा असमझदारी बढ्ने छ । धार्मिक क्षेत्रतिरको यात्रामा मन जानेछ । मायाप्रेममा अबिश्वास बढ्ने तथा जीवनसाथीसँग मनमुटाव बढ्ने छ ।
कर्कट ( ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो):- सत्यता बुझेर अगाडि बढ्नुको सट्टा हल्लाको पछि लाग्दा दुख पाईनेछ । पुरानो रोगले सताउन सक्छ, ध्यान दिनुहोला । अनावश्यक यात्रा तथा खर्च बढ्ने हुनाले मन चिन्तित रहनेछ । अरुकै कामका लागि समय खर्चनु पर्ने हुँदा आफ्नो काम थाती रहनेछ । सवारीसाधनको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला, समय मध्यम रहेको छ । प्रेममा एक अर्कालाई अबिश्वास गर्नाले टाढिनु पर्ने बाध्यता आउनेछ ।
सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे):- सुखदुःखमा साथ दिनेहरू प्रशस्तै भेटिनेछन् भने परिवारजनको साथले नयाँ आशा पलाउनेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनुका साथै दाम्पत्य सुखमा रमाउने समय छ । विभिन्न सहयोग र उपहार पाइने छ। आयआर्जन पनि राम्रै हुनेछ । अतिथिका रूपमा सम्मान प्राप्त हुन सक्छ । रमाइलो यात्रा गर्ने अवसर जुट्नेछ । कामबाट पनि फुर्सद पाइनेछ । व्यापारकै शिलशिलामा यात्रा हुने योग रहेको छ ।
कन्या ( टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो ) :- कुनै पनि विवाद वा प्रतिस्पर्धामा अरुभन्दा पछि परिनेछ । मुद्दा मामिला तथा यस्तै क्रियाकलापमा सामेल नहुनु नै राम्रो रहेको छ । आफन्त तथा कुटुम्बसँग मनमुटाव बढ्ने योग रहेको छ । सत्रुहरुले टाउको उठाउन खोज्नेछन्, ध्यान दिनुहोला । व्यापारमा भनेजस्तो आम्दानी नहुने हुनाले दैनिकी प्रभावित हुनेछ । तपाईको कामबाट अरुले फाईदा लिन खोज्नेछन् । स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या आई खर्च बढ्नेछ ।
तुला ( रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते ) :- बिभिन्न समस्याको फेस गर्नुपर्दा मानसिक तनाव बढ्नेछ भने खुलेर काम गर्ने वातावरण नहुँदा आर्थिक क्षेत्र धरासायी हु सक्छ, सचेत रहनुहोला । सुधारात्मक क्षेत्रमा गरिएको लगानी त्यसै खेर जानेछ । अध्ययन तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा अलि बढी समय दिए सकारात्मक नतिजा निकाल्न सकिने छ । प्रेम गर्ने जोडीहरु आज टाढै बस्नु उचित छ, मायाप्रेममा धोका हुनसक्छ । खानपानमा ध्यान दिनुहोला, सामान्य पेट सम्बन्धी समस्या आउन सक्छ ।
बृश्चिक ( तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू ) :- मायाप्रेममा अबिश्वास सिर्जना हुनेछ भने घर परिवारमा आमासँग मनमुटाव उत्पन्न हुनेछ । अन्य काममा व्यस्त हुँदा पढाईलेखाई कमजोर रहनेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा समय लगानी गरेपनि पद प्रतिष्ठा नपाईने हुनाले मन खिन्न हुनेछ । व्यापार व्यवसायमा अरुदिन भन्दा ज्यादा समय खर्चिनु पर्नेछ । तर पनि कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा समय लगानी गर्नेहरुले भनेजस्तो आम्दानी गर्न सक्नेछन् ।
धनु ( ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे ): – दौडधुप तथा लामो खटाईले मात्र कामहरु सम्पादन हुनेछन् । पुराना मुद्दाहरुको निर्णय तपाईको पक्षमा नआउने तथा नयाँ विवादमा फस्ने योग रहेको छ । उद्योग तथा व्यापारमा लगानी गर्ने अवसर आएपनि तत्काल भन्दा पनि पछिको लागी फाईदा हुनेछ । आफुभन्दा ठुला तथा प्रतिष्ठित व्याक्तिहरुसँग विवाद बढ्ने योग रहेको छ । तर पनि सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिको प्रयोगमार्फत आफ्ना विचारहरु जनमानसमा लैजान सकिने छ ।
मकर ( भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) :- नराम्रो काम तथा नराम्रा घटनाहरुको सामना गर्नुपर्दा दिनलाई सही रुपमा सदुपयोग गर्न सकिनेछैन । अध्ययन तथा अध्यापनको क्षेत्र तपाई आफ्नै कारणले कमजोर रहनेछ । बोल्दा वा कुनैपनि प्रस्तुतिमा भाग लिदा प्रशस्त तयारी गर्नुहोला, कमजोरी गरेको वा भएको आभास हुनेछ । तयारी बिनानै प्रश्तुत गरिने कुनै पनि योजना बिफल हुनसक्छ, ध्यान दिनुहोला । व्यवसायमा सामान हराउने तथा नाफा कमाउन अरु दिन भन्दा बढी समय खर्चनु पर्नेछ ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा ):- व्यापार व्यवसायमा प्रशस्त नाफा कमाउन सकिनेछ भने लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सकिने छ । समयमा कामहरु सम्पन्न हुने तथा अरुको काम गरी नाम तथा दाम दुवै कमाउन सकिने छ । अध्ययन तथा अध्यापनको क्षेत्रमा थोरै समय लगानी गर्दापनि सकारात्मक नतिजा हात लागी हुने ग्रहयोग रहेको छ । मायाप्रेममा आफ्नो मान्छेलाई आफ्नै वरिपरी देख्न पाउँदा मन प्रशन्न हुनेछ ।
मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची):- समयमा काम नबन्ने हुनाले आर्थिक पाटाहरु कमजोर रहनेछन् । लेनदेनको विवादले आत्मसम्मानमा दाग लाग्न सक्छ, ख्याल गर्नुहोला । टाढाको यात्रा हुने भएपनि यात्राको क्रममा दुःख पाईनेछ । शरीरमा आलश्यता बढेर जानेछ भने भौतिक तथा विलाशी वस्तु हराउन सक्छ, ख्याल गर्नुहोला । तर पनि विदेशमा बसेर काम गर्नेहरुका लागि वा विदेशी सामानको व्यापार गर्नेहरुका लागि समय राम्रो रहेको छ । तपाईको दिन शुभ रहोस् ।
सेवाग्राहीसँग ५० हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा सवइन्जिनियर पक्राउ भर्खरै
‘मिस एण्ड मिसेज डिश्याबिलिटी क्वीन आयोजना हुने ३ मिनेट पहिले
दोभान आगलागीपीडितलाई भट्टराईको पाँच लाख सहयोग ६ मिनेट पहिले
नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहको संसदीय दलको बैठक जारी १२ मिनेट पहिले
जनमत संग्रहमा जानुपर्छः विप्लब १३ मिनेट पहिले
नेपाललाई सुन्दर देश बनाउने विप्लवकाे सपना १८ मिनेट पहिले
न्यूजिल्याण्डविरुद्धको टी–२० सिरिजकाे चौथो खेलमा अष्ट्रेलिया विजयी २७ मिनेट पहिले
सरकार र विप्लवबीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर ३० मिनेट पहिले
सीमा जोड्ने ११ सहायक सडक सम्पन्न ३६ मिनेट पहिले
ओलीले विप्लवसँग सहयात्राको प्रस्तावका साथ अगाडि बढ्ने ३८ मिनेट पहिले
दाहाल–नेपाल समूह आयोग पुग्याे ४३ मिनेट पहिले
सन्दीपले पाए काठमाडौं मेयर टिमको कप्तानी ४४ मिनेट पहिले
सार्वजनिक भए विप्लव, सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हुँदै ४६ मिनेट पहिले
ओली र विप्लव राष्ट्रियसभागृह पुगे, संचारकर्मीको बाक्लो उपस्थिती ५३ मिनेट पहिले
प्रचण्ड–माधव समूह आयोग पुग्यो २४ घण्टा पहिले
एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको ८.४२ प्रतिशत लाभांश घोषणा ५ घण्टा पहिले
कालिका लघुवित्तले शेयरधनीलाई १० प्रतिशत बोनस शेयर दिने ४ घण्टा पहिले
११ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकीयो किशोरी सम्मेलन ३ दिन पहिले
नेप्सेमा मञ्जुश्री फाइनान्सको बोनस शेयर सूचीकृत ४ दिन पहिले
गाउँमा सडक पुगेपछि बाजागाजासहित खुशीयाली ३ दिन पहिले
गृहले गर्‍यो ५२ जना सीडीओहरुको सरुवा, काे-कहाँ ? ७ दिन पहिले
फुङ्लिङमा आगलागीबाट ३३८ परिवार विस्थापित २ दिन पहिले
न्यूक्लियर मेडिसिन सेवा पुनः शुरु ५ घण्टा पहिले
शिथिल भएको व्यवसाय पुनःरुत्थान गर्न मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्छ ३ हप्ता पहिले
स्पेनको भ्यालेन्सिया राज्यमा एनआरएनएको समिति गठन ३ हप्ता पहिले
बन्द प्रशिक्षणमा क्रिकेट खेलाडी ४ हप्ता पहिले
वसन्तपुर क्षेत्रका अनधिकृत पसलहरु हटाउन सात दिने अल्टीमेटम, नटेरे कारवाही ३ दिन पहिले
निर्माणाधीन स्वास्थ्य सेवा केन्द्रलाई १ अर्ब ८ करोड रकम स्वीकृत २ दिन पहिले
राजा र सृजु अभिनित ‘थोत्रे साइकल’ सार्वजनिक ३ महिना पहिले
गायिका भावना उपाध्ययको आवाजमा अपाङ्ग सार्वजनिक २ महिना पहिले
प्रहरी अपडेट :– सडकबासीको सहारादेखि शिक्षकमाथि कारबाहीसम्म २ वर्ष पहिले